YEYINTNGE(CANADA): Sunday, March 28
28 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/3vzmp0r28 March2010 Yeyintnge Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/28/20100အကြံပြုခြင်း
“၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ (သို့) စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးမိုက်တွင်းဖြစ်စေ”
ဒီအချိန်မှာ စစ်အစိုးရက တဘက်သတ်စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး အတင်း ကသောကမျော အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဟာ ဘယ်လိုဘာညာ စတာတွေ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးထပ်ပြီး ဝေ ဖန်သုံးသပ်ပြောဆို နေစရာအကြောင်း မရှိတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာစာနယ်ဇင်းသမားတွေ ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေသာမက နိုင်ငံရပ် ခြားက ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေ ဝေဖန်သုံး သပ်သူတွေကလည်း ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အစိုးရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာကို စစ်အစိုးရက တုန့်ပြန်ပြသပြောကြားခဲ့တဲ့ အပြောအပြတွေ အားလုံးကိုလည်း မြန်မာ့ အရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေအားလုံး သိရှိခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာ တာတခုက စစ်အစိုးရဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ထာ ဝရအုပ်ချုပ် ချယ်လှယ်ဖို့ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ ဆေးမြီးတို ဆေးမြီးရှည် ရေတိုရေရှည် နည်းနာတွေ အားလုံး ကိုအသုံးပြုပြီး ပြင်ဆင်နေခဲ့တာပါ။ ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် ဘယ်နိုင် ငံက ဘာပြောပြော ဘယ်လိုဝေဖန်ဝေဖန် နကမ္ပတိ ပါပဲ။
ဟောအခုတချို့တချို့သောသူတွေ စောင့်စားမျှော်လင့်နေကြတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ စတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေကိုထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့အပါမခံချင်တဲ့ သူတွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်လိုက်သလို သူတို့ကမပါစေချင် မရှိစေချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်း အကျဉ်းအကျပ်ဖြစ်အောင် ချောင်ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဟာ ဘာဆိုတာလည်း ခုချိန်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိပြီးလောက်ကြပါပြီ။ နိုင်ငံတကာက မြန်မာ့အရေးးစိတ်ဝင်စားကြ၊ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကျင်းပမှာလဲလို့ စောင့်ကြည့်လို ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားလေ့လာသူတွေ အတွက်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို အင်္ဂလိပ်မူ မထုတ်ဘဲ မြန်မာဘာသာ တခုတည်းနဲ့ ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့အတွက် သူတို့ကတော့ သိပ်မရှင်းလှဘဲ ရှုပ်ထွေးနေကြရှာပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ စစ်အစိုးရက ခုလို ၂ဝ၁ဝ ခုရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးတာဟာ စစ်အစိုးရက နောက်တလှမ်းဆုတ်ပေးလိုက်တာပဲလို့ အံ့သြစ ရာကောင်းလောက်အောင် ယုံကြည်နေကြတဲ့(ဒါမှမဟုတ် ယုံကြည်ချင်ယောင်ဆောင်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်) နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ၊ နိုင်ငံ ရေးမှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ အနည်းဆုံးအမတ်တော့ ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုကြသူတွေကတော့ စစ်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပါ စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေနဲ့အညီ မှတ်ပုံတင်ဖို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။
နိုင်ငံတကာကတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းမကျဘူး၊ အလုံးစုံသဘောမဆောင်သလို လွတ်လပ်တရားမျှတ နိုင်ခြေမရှိဘူးလို့ ကန့်ကွက်ပြောဆိုနေကြပြီး ခုဆိုဒီကိစ္စကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဆွေးနွေးဖို့အထိ လက်ခံလိုက်ကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပေမယ့် ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ တစုံတရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင် စရာ မမြင်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးသံတမန် မစ္စတာကွင်တာနာ ကတော့ မ ကြာခင်က သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အပြီးမှာ ၂ဝ၁ဝ ခုရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်တရားမျှတစရာ အလားအလာမရှိဘူးလို့ ထုတ် ဖော်ပြောကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူက မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ လူသားမျိုးနွယ်ကို ဆန့်ကျင်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်သလို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်း ကျူးလွန်မြဲကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တဲ့ အ တွက် မြန်မာစစ်အစိုးရကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးတင် တရားစွဲဆိုနိုင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂက စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တခုဖွဲ့စည်းစေ လွှတ်စုံစမ်းစေသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
လူထုဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ စစ်အစိုးရထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဟာ တဦးတ ယောက်တည်းကို ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားခဲ့တာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက် အလွန်ရှက်စရာကောင်းကြောင်း အဲဒီဥပဒေအတိုင်း လက်ခံလိုက်နာစရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရန်သာရှိကြောင်း သူ့ပါတီနဲ့ ပြည်သူလူထုက ထုတ်ဖော်ပြောကြား ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် အဖက်ဖက်က ပြင်ဆင်အားယူရင်ဆိုင်ဆန့်ကျင်ကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းအား ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခုမကြာခင်လေးကမှ ကြားခဲ့ရတဲ့ သတင်းအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံကြတဲ့ ပါတီ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ သူ့ပါတီရဲ့ဗဟိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကို သူ့ခြံထွက်ဗူးသီးကြီးတလုံး လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါကိုလည်း ပါတီ ဗဟိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့က သူတို့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမရဲ့သဘောထားကို နိမိတ်ပုံသင်္ကေတပြု ပြသလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆ သဘောထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီသတင်းဟာ အမှန်ပဲဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ လူထုဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဟာ နိုင်ငံရေးသာအားကောင်းတာမဟုတ်ဘဲ အနုပညာအားလည်းရှိတယ်ဆိုတာ ပြသလိုက်တာပါပဲ။
လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီရေး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မြတ်နိုးကြသူ ပြည်တွင်းပြည်ပက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ဒီတပွဲမှာ အဆုံးအ ဖြတ်မမှားကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဆုံးအဖြတ်မှန်ကန်ရဲရင့်ဖို့ လိုအပ်သလို မိမိတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်မှုပ်ရှားကြဖို့၊ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရယ်တွေကို ကြိုတင်စဉ်းစားပြီး ရင်ဆိုင်တုန့်ပြန်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လည်း လိုအပ် ပါလိမ့်မယ်။ ခြိမ်းခြောက်တိုင်းမကြောက်ကြဖို့၊ ဖိနှိပ်တိုင်းပိပြား ပျပ်ဝပ်မသွားကြဖို့ အားမာန်သတ္တိတွေ မွေးမြူကြရပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ ကမ္ဘာကျော် တရုတ်တော်လှန်ရေး ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ လူရွှန်း ပြောခဲ့တဲ့ စကားတခုကို ကိုယ်းကားဖော်ပြ ချင်ပါတယ်။ လူရွှန်းက “ဒီကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာ ဆက်လက်အသက်ရှင်နေတဲ့ ဆန္ဒတကယ်ရှိနေတဲ့လူတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆို ရင် သူတို့တတွေဟာ ပထမဦးဆုံးပြောရဲရမယ်၊ ရယ်ရဲရမယ်၊ ငိုရဲရမယ်၊ ဒီကြိမ်ဆဲခံနေရသလို ဆိုးဝါးလှတဲ့ခေတ်ကြီးကို ဒေါသထွက် ရဲရမယ်၊ ရှုံ့ချရဲရမယ်၊ တိုက်ခိုက်ရဲရမယ်၊ ခြေမှုန်းနိုင်ရဲရမယ်” လို့ အဖိနှိပ်ခံပြည်သူလူထုကို အားပေးပြောကြားသွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
အမှန်တရားဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအမှန်တရားနဲ့ ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လို အာဏာရှင်မျိုးကမှ ထာဝရအနိုင်ယူ ထားနိုင်ခဲ့တာမျိုး ကမ္ဘာ့သမိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ တညီတညွတ်တည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တွန်း လှန်ဖြိုဖျက်ပစ်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ ။
ထွက်ပေါက်ပိတ် နေသည် မှာ NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တွေ မဟုတ်ပဲ စစ်အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေ
နောက်ဆုံးလက်ပြ နှုတ်ဆက်ခြင်းပေးလော ဓာတ်ပုံ - ရိုက်တာ
အသက် ခုနှစ်ဆယ် ကျော် အရွယ်ရှိ သည့် မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေမှာ
မိမိ၏ ပါးနပ်ကျင်လည် မှု အတွက် အတိုက်အခံများ ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့ များ
အခက်တွေ့ ကာ ပြိုကွဲ တော့ မည် ဟု စိတ်ကူးယဉ် နိုင်သော် လည်း လက်တွေ့ တွင် ထိုသို့ ဖြစ်လာ
ဖို့ က ရာခိုင် နှုန်း အလွန် နည်းပါးသည်။
နိုင်ငံ အရှေ့ ပိုင်းရှိ လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့ များ ကို နှိမ်နှင်းရန် မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေချိန် တွင် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ကို အစိတ်စိတ် အမြွာမြွာ ဖြစ်စေရမည် ဟု အကြံကလည်း ပြည်တွင်းနိုင်
ငံရေး အကျပ်အတည်း နှင့် နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးမှု နှင့် သာ ကြုံစေရသည်။
ယနေ့ ကျင်းပသည့် တပ်မတော်နေ့ (တော်လှန်ရေးနေ့ )အခမ်းအနားမှ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ (AP Photo/David Longstreath)
အကယ်၍ သာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်က ရွေးကောက် ပွဲ မ၀င်တော့ ဘူးဆိုပါက
ဗြိတိန် သံအမတ် ပြောသလိုပင် မြန်မာ ပြည်တွင်း ရေးသည် နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေး ကိုထိပါး
ထို့ ပြင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အမျိုးသား ဒီမိုပရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် အနေဖြင့် ရွေးကောက်
ပွဲ တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုပါက အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲ ၏ တန်ဖိုးသည် ခွေးသေကောင်
ပုပ် လောက် သာ ရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။
တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်များက တစ်ဖက် ၊ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ ကတစ်ဖက်
အဖက်ဖက် မှ ချွတ်ချုံ ကျလာသောကြောင့် မဟန် နိုင်တော့ သည့် စီးပွားရေး ကတစ်ဖက် ၊နေပြည်
တော်ရှိ နောက် ကျော ဓား နှင့် ထိုးမည့် ဗိုလ်ချုပ် များ ကတစ်ဖက် ဖြင့် မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်သည်
သွက်ချာပါဒ လိုက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင် စနစ် နှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလ အတွင်း ယခု အချိန်သည် ၎င်းတို့ အတွက်လည်း
ဘေးကျပ်နံကျပ် အဖြစ်ဆုံး ကာလ ဖြစ်မည်မှာ လည်း သေချာပေသည်။
မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် သည် ၎င်း၏ နောက်ဆုံးအချိန် အား အီရတ် အာဏာရှင် ဆဒမ်ဟူစိန် နှင့် ယူဂိုဆလား
ဗီးယား ခေါင်းဆောင် မီလိုဆီဗစ် တို့ ၏ ဘ၀ နေ၀င်ချိန် မျိုး မဖြစ်ရ အောင် Finishing ကောင်းကောင်းဖြစ်ဖြစ်
Safe side ပြုလုပ်နေသော်လည်း အာဏာရှင် ၏ အလွန် အကျွံ အနိုင်လိုချင် မှု ဖြစ် ဖန်တီးထားမှု များသည်
၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် ဓားသွားပေါ် တွင် ကသည့် ဆက်ကပ် ကို က နေသလို ပင်ဖြစ်ချေသည်။
၀ါဒဖြန့် ချိရေးတွင် မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် က သူ၏ စစ်တပ် နှင့် ပြည်သူ ချစ်သည် ဟု ဆိုသော်လည်း
အနောက် တိုင်း သံတမန် တစ်ဦးက မူ ၎င်း ၏ မြေးလောက် ၎င်း ၏ စစ်တပ် ကိုချစ် မည် မဟုတ် ဟု
ဇာတ်ထဲ တွင် ပြောကြလေ့ရှိသည့် စကား အတိုင်း ” သူ့ အသက် ကို သတ်ရင်း တန်းလန်း နှင့် ငါပါသေ
သည် ” ဆိုသည့် အဖြစ်မျိုး အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်နေသည့် မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် များ ကြုံ တွေ့ နေပြီဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေ အတွက် ဆန္ဒခံယူပွဲ တွင် စစ်အစိုးရက ရှုံးလည်း နိုင် ၊ နိုင်လည်း နိုင် ရမည်
ဟု ခံယူပြီး ဖြစ်မြောက် အောင်လုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ကိုလည်း ၎င်း တို့ က ထို အတိုင်းပင် တွက် ဆထားဟန်ရှိသည်။ သို့ သော် မြန်မာ နိုင်ငံရေး သမိုင်းတွင်
ခဏ ခဏ နိုင်ခဲ့ဖူးသည့် သာဓက များက သိပ်ပြီးတော့ များ များ စားစားရှိခဲ့သည် မဟုတ်ပါ။
မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် များအတွက်မူ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသည် ၎င်း တို့ အခေါင်း ကို ၎င်း တို့ ကိုယ်တိုင်
လူအများ ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကို လွန်ခဲ့သည့်သတင်းပတ်များအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် သူ၏ အာဏာပလ္လင်အား တဦးဦးဖြင့် လူစားထိုးမည်လော သို့မဟုတ် ယခုအတိုင်းချန်လှပ်ထားခဲ့မည်လော ဆိုသည်ကို မြန်မာ့အရေး လေ့လာ စောင့်ကြည့် သုံးသပ်နေသော ပညာရှင်က၀ိများ အနေဖြင့် အပူတပြင်း စဉ်းစားတွက်ချက်နေကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အနေဖြင့် သူ၏နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုနှင့် ကိုင်စွဲထားသော အာဏာကိုလိုလိုလားလား စွန့်လွှတ်ပါ့မလားဆိုသည့် အချက်ကတော့ လူအများအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေသည်။
နေပြည်တော်မှ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရသော သူများ၏ အဆိုအရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သည် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလတွင် သမ္မတရာထူးနေရာ၌ ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အစီအစဉ်များ ရှိနေသည်ဟု တပ်မတော်အတွင်းမှ အရာရှိတချို့က ယုံကြည်နေကြသည်။ သို့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် ကုလသမဂ္ဂအရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်ကာလက သူ့အနေဖြင့် မကြာခင် အနားယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားခဲ့သေးကြောင်း သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
နေပြည်တော်မှာ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာနှင့် အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများ၏ အဆိုအရ တပ်မတော်အတွင်းရှိ အချို့ အုပ်စုများအနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအား ကာလသတ်မှတ်ချက် အပိုင်းအခြားမရှိဘဲ အာဏာကိုဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားရန် ဆန္ဒရှိနေကြပြီး နောက်ဆုံးအချိန်အထိ တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွား ရန် တိုက်တွန်းမှုများ ရှိနေသည်ဟု ကြားသိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကောလဟာလများအရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် စစ်အစိုးရအတွင်းမှ တတိယ မြောက် အာဏာရှိသူ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းအား ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ကာလ အတွက် သမ္မတ ရာထူးပေးအပ်ရန် လျာထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းနှင့် ဇနီးတို့သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အပါအ၀င် ၎င်း၏မိသားစုဝင်များနှင့် အလွန်နီးစပ်သူများလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုမိသားစု နှစ်စုသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ အတူတကွ အမြဲဈေးဝယ်ထွက်ကြကြောင်းလည်း သိရှိရသည်၊
သို့သော်လည်း စစ်တပ်အတွင်းမှလာသော သတင်းများအရ သူရရွှေမန်းသည် ယခုအခါ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် မလိုအပ်တော့ကြောင်းကြားသိရပြန်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသည် ယခင်က ဧရာဝတီတိုင်း တိုင်းမှူး ဖြစ်ခဲ့ သည်။ ထိုနေရာမှ ရန်ကုန်ရှိစစ်ရုံးချုပ်သို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားပေးခဲ့ခြင်းသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ် အစောပိုင်း နှစ်များ အတွင်း ရေပန်းစားခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်အား ပြန်၍ အားပြိုင်နိုင်စေရေးအတွက် ခန့်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု သိရှိရသည်။ အာဏာလက်စောင်းထက်လှသော ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ်တဖြစ်လဲ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တခုလုံးနှင့်အတူ ရာထူးမှ ထုတ်ပယ် ခံလိုက်ရ သည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် သူ၏ ပြိုင်ဖက်များအတွင်းမှ အန္တရာယ် အရှိဆုံးသူ တဦးကို ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မြှောက်စားခဲ့သော၊ ရာထူးတင်ပေးခဲ့သော လူလတ်ပိုင်း စစ်အရာရှိ များထဲမှ တဦးဖြစ်သည်။ ထိုအရာရှိများသည် တပ်မတော်အတွင်း ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးများ ဖြစ်လာသကဲ့သို့ ၀န်ကြီးများအဖြစ်လည်း ရာထူးများ ရရှိခဲ့ကြသည်။
သတင်းအချက်အလက်များအရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသည် မန်မာနကြီးသူတဦး မဟုတ်သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို အပြည့်အ၀ရရှိသူ တဦးမဟုတ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိတ်ချယုံကြည်သော ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း၂၀၀၇ ခုနှစ်၌ ကွယ်လွယ်အပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ စိတ်ကြိုက် ထိပ်တန်းအရာရှိများ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။
အကယ်၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကာလအပြီးတွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်နှင့် သူ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အာဏာနေရာကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲ ထားမည်ဆိုပါကလည်း အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိပ်တန်းအဖွဲ့ဝင်များသည် နိုင်ငံခြားဘဏ်များတွင် ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံခြားငွေ အမြောက်အများရှိနေ သကဲ့သို့ မက်မောဖွယ်ကောင်းသော စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကိုလည်း တဖက်တွင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပိုင်ဆိုင် ထား ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ တဦးချင်း ချမ်းသာ၍ ဓနကြွယ်ဝလာမှုများသည် လာမည့်နှစ်အတော်များများအထိ ဆက် လက် အကျိုးခံစား နေရဦးမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ဤနေရာတွင် မေးရမည့်မေးခွန်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် မည်သည့်နည်းနာကို သုံးစွဲ၍ သမ္မတကြီးအဖြစ် အာဏာကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်မည်နည်း ဆိုသည်ပင်ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အသစ်ဖြစ်လာမည့် သမ္မတသည် အမျိုးသားကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကို ကြေညာ နိုင်သကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်း ဖျက်သိမ်းနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် ညွှန်ကြားချက်များ အမိန့်များ ဆက်လက်ပေးနေဆဲ ဖြစ်သော်လည်း ရန်ကုန် မန္တလေး တို့တွင် ထိပ်တန်းစစ်အရာရှိများနှင့် နိုင်ငံရေး၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် ကျင်းပသော ပုံမှန်အစည်း အဝေးများကို ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်၍ ညွှန်ကြားနေရသူကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသာဖြစ်သည်။
မည်သူသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်မည်နည်းဆိုသည့် မေးခွန်းက ယခုအချိန်တွင် အရေးကြီးနေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ယုံကြည်စိတ်အချရဆုံးဖြစ်၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ ဇနီးနှင့်နီးစပ်သော ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေကတော့ အဆိုပါရာထူးအတွက် ယနေ့ အချိန်တွင် တစ်ပြေးနေတဦးဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် နောက်တချက်ရှိသေးသည်။ ခေတ်မီ၍ အားကောင်းသည်ဟု ယူဆထားသည့် တပ်မတော်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေဖြင့် အခြားသူ တဦးဦးလက်ထဲသို့ ထိုးအပ်ရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ သူ၏ တပ်မတော်အတွင်းမှ ထိပ်တန်းအရာရှိများအကြားတွင် ရှိနေသည့် အာဏာပြိုင်ဆိုင်မှုများ အကြောင်းကို သူ ကိုယ်တိုင်လည်း ကောင်းကောင်းသိသူ တဦးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ စစ်တပ်ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရာထူးကို စွန့်ခွာလိုက်ပါက နောင်တွင် စစ်တပ်ကိုပြန်လည် ထိန်းချုပ်ရန် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် ခက်ခဲကောင်း ခက်ခဲနိုင်ပါမည်။ ထိုအချက်သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် စိုးရိမ်သောက အရောက်ရဆုံး ကိစ္စဖြစ်နိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင် တွေ့မြင်နေရသည့် အပြောင်းလဲများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုဟု ဆိုပါစို့။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် စိုးရိမ်သောကဖြစ်စေရသည့်အချက်မှာ သူ့ထက် အသက်ငယ်ရွယ်သော စစ်တပ်နှင့် ၀န်ကြီး အဖွဲ့များထဲမှ လူလတ်ပိုင်း ထိပ်တန်းစစ်ခေါင်းဆောင်များသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထိုလူလတ်ပိုင်း စစ်ခေါင်းဆောင်များသည် ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်း တရိပ်ရိပ်ဖြင့် ပိုမိုချမ်းသာ ကြွယ်ဝလာကြသကဲ့သို့ ပို၍လည်း အာဏာလက်စောင်း ထက်လာကြသည်ကို တွေ့ရှိရသောကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအား ညသန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် အိပ်မက်ဆိုးဖြင့် လန့်နိုးစေသူ မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်ဆိုသော စစ်အရာရှိများသည် သူကိုယ်တိုင်နှင့် သူ၏ မိသားစုလုံခြုံရေးကို လာမည့်အနာဂတ်ကာလတွင် အာမခံနိုင် မခံနိုင် ဆိုသည်ကသာ အမှန်တကယ် မေးရမည့် မေးခွန်း ဖြစ်သည်။
ရှေ့အနာဂတ်တွင်လည်း သူ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေဖြင့် များစွာသော ထိပ်တန်း စစ်ခေါင်း ဆောင် များကို ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်း အကျယ်ချုပ် ချထားခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ကာကွယ်ရင်း နေထိုင် သွားရ ပေလိမ့်မည်။ ထိုအထဲတွင် သူနှင့်သူ့မိသားစုနှင့် အစေးမကပ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် သည်လည်း တဦး အပါ အ၀င်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော အချက်များကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် ထွက်တော်မူနန်းကခွာခြင်းသည် သူနှင့်သူ့မိသားစု အတွက် အန္တရာယ်များ လှသောကြောင့် တနည်းနည်းဖြင့် အာဏာကိုဆက်လက်ကိုင်စွဲခြင်းကသာ အကောင်းဆုံး ဗျူဟာဖြစ်တော့သည်။
အကယ်၍ ဤသို့မဟုတ်ဘဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိတ်ပြောင်းလာသည် ဆိုပါစို့။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ် ဌေးဦး တို့အတွက် ထိပ်တန်းရာထူးများက အဆင်သင့် ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။
အလားတူပင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေအား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် စိတ်လေး နေသည်ဆိုပါက သူ့အနေဖြင့် ရွေးချယ်ရန် လူလတ်ပိုင်း ထိပ်တန်းအရာရှိများ ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ် လှဌေးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ် ကိုကို၊ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဆွေတို့ ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။
လောလောဆယ် အနေဖြင့် သမ္မတကြီးဖြစ်ရန် ရည်စူးနေပုံရသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကို လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကံကောင်းပါစေကြောင်း စကားပါးလိုက်ရပါသည်။
NLD LA USA statement
http://ifile.it/km3gdxyNLD LA USA ,,
နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူ ဆန့်ကျင်ကြ
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်
စာအမှတ် ။ ။ ၄/၂၀၁၀(မဃတ+၈၈+ဗကသ)
ရက်စွဲ။ ။ မတ်လ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။
နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူ ဆန့်ကျင်ကြ
(၁) ယခုလာမည့် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများ အောက်တွင် ပါတီမှတ်ပုံ တင်ရေး မတင်ရေးကို ဆုံးဖြတ် ကြတော့မည် ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ပါတီတရပ် အနေဖြင့် မိမိတို့ ပါတီတွင်း ကိစ္စကို မိမိတို့ဖာသာ လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင် သည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွင် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ လူထု အရေးတော်ပုံကြီးနှင့် အတူ ပေါ်ပေါက်လာ ခဲ့သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဆိုသည်မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ သက်သက်နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည့် ပါတီ မဟုတ်ဘဲ၊ မိမိတို့ မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ နှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်အပြင် ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်နေသည့် ပြည်သူ့ပါတီဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး အားလုံးကို ပြည်သူ တရပ်လုံးကပါ အတူ ခံစားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၂) ထို့ကြောင့် ယနေ့ အချိန်တွင် နအဖ စစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများ နှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် မည်သို့ သဘောထား၍ မည်သို့ ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းမလဲ ဆိုသော ကိစ္စသည် မြန်မာ ပြည်သူ လူထု တရပ်လုံး တာဝန် ရှိရှိ ၀ိုင်းဝန်း စဉ်းစား၍ တာဝန် ရှိရှိ သဘောထား ပေးကြရမည့် အချိန် ဖြစ်နေပါသည်။
(၃) အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး လည်းဖြစ်၊ မိမိတို့၏ လူထု ခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယခု အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ပြတ်သားသည့် သဘောထား များကို အောက်ပါ အတိုင်း ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မတ်လ ၁၁ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဗွီအိုအေ အသံလွှင့် အစီအစဉ်တွင်
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာကတော့ ဒီဥပဒေတွေက အဖွဲ့ချုပ် အတွက်ရော၊ အားလုံး အတွက်ပါ တကယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေပဲ။ အဲဒီ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြဖို့ လိုတယ်။ ပြည်သူ လူထုကလည်း ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့၊ စိန်ခေါ်မှု တွေကို ကျြော်ဖတ်နိုင်ဖို့ ညီညွတ်ဖို့၊ စိတ်ဓာတ် ခွန်အားတွေ ရှိဖို့ လိုတယ်လို့ အဲဒီလို ပြောတာပါ။ ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့၊ ကျော်ဖြတ်ဖို့၊ ကျော်လွန်ဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့ဟာ ပိုပြီးတော့ ညီညွတ်မှု ရှိရှိနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဲ့။” ဟူ၍လည်းကောင်း၊
မတ်လ ၂၃ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဗွီအိုအေ အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွင်
စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေဟာ တရားမျှတမှု မရှိတာကြောင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်တဲ့ အကြောင်း ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ ဟူ၍လည်းကောင်း ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းမှ တဆင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် တကွ မြန်မာ ပြည်သူ လူထုကြီး တရပ်လုံးသို့ သူ၏ သဘောထားကို ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(၄) လူထုက ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဖြင့် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် (mandate) ပေးထားသော ပါတီ ဖြစ်သည့် အတွက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေး အရ တရားဝင် ဖြစ်မှုသည် ပြည်သူလူထု၏ အဆုံးအဖြတ် ပေါ်တွင်သာ တည်မှီပြီး၊ နအဖ စစ်အစိုးရ အပေါ်တွင် လုံးဝ မတည်မှီပါ။ ပြည်သူလူထုက အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံ နေသရွေ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ပြည်သူ့ ပါတီ အဖြစ် ရပ်တည် နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ နအဖ စစ်အစိုးရက အသိအမှတ် ပြုလျှင် ထားရာနေ စေရာသွား နအဖ စစ်အစိုးရ ပါတီ အဖြစ်သာ ရပ်တည်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၅) ထို့ကြောင့် ယနေ့အချိန်ကာလတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဘောထားများနှင့် အညီ
၁) ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာ စာတမ်းကို ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ပြီး
၂) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ကို နာခံကြောင်း လက်မှတ် ထိုးရသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို လုံးဝ ပြတ်ပြတ် သားသား ငြင်းပယ်ရန်သာ ရှိပါသည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ပြည်သူကြားက ပေါက်ဖွား လာသည့် ပြည်သူ့ ပါတီဖြစ်သည့် အတိုင်း ပြည်သူ လူထု၏ ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ ပြည်သူ လူထုကြားတွင် ဗမာ တပြည်လုံး ကိုယ့်ပါတီ ရုံးခန်း အဖြစ် သဘော ထားပြီး စစ်အစိုးရ ထံတွင် လုံးဝ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း မလုပ်ဘဲ ပြည်သူနှင့် လက်တွဲ၍ ဆက်လက် ရပ်တည် လှုပ်ရှားသွားရန် မိမိတို့ မြန်မာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ နှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်တို့မှ အလေး အနက် တိုက်တွန်း လိုက်ပါသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂမများ အဖွဲ့ခွဲ့ချုပ်
NLD ၅၆ နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ. အခန်းအနားဓါတ်ပုံများ
၆၅ နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အင်န်အယ်ဒီရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပ
ယမန်နေ့က ကျရောက်သော မြန်မာပြည်၏ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ ၆၅ နှစ် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အင်န်အယ်ဒီပါတီရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်ကိုတွေ့ရစဉ်။
http://ifile.it/ay95dqiUNA's March 27
Statement on Burmese Regime’s 2010 Election Laws
Today marks the 63rd anniversary of Burma’s Armed Forces Day which is known as the Fascist
Revolutionary Day: the day the people of Burma united under General Aung San to fight
against the fascist Japanese army; which ended the Japanese occupation of the country.
August 1988: millions of people marched and demanded the restoration of democracy in Burma
and an end of the military dictatorship which had ruled the country since 1962. However, the
fascist Burmese military brutally cracked down on peaceful demonstrators and killed over 3000
people, including monks and students.
Daw Aung San Suu Kyi, the daughter of Burma’s independence leader General Aung San,
emerged as the leader of the democracy movement and her organization, the National League
for Democracy (NLD), won 82% of the parliamentary seats in the national election held in 1990.
But the military dictators ignored the people's wishes and refused to transfer power to Burma’s
March 2010: the military authorities in Burma, known as the State Peace and Development
Council (SPDC), announced unjust new electoral laws in preparation for the elections planned for
We are deeply concerned that the SPDC’s electoral laws which, contrary to the wishes of the
people of Burma and the international community, exclude Daw Aung San Suu Kyi and more than
2,100 political prisoners from political participation, fail to convene an all inclusive, credible
election which would createademocratic Burma.
The SPDC’s election law may also prohibit Daw Aung San Suu Kyi and political prisoners from
being members in political parties. This is clearly another step in the wrong direction taken by the
military authorities. The political party registration law makesamockery of the democratic
process and ensures that the upcoming elections will be devoid of credibility.
On this remarkable day we, the Burmese Democratic Forces in Canada, call for the following:
1) that the Burmese military regime release all political prisoners including
Daw Aung San Suu Kyi, 88 student leaders and ethnic leaders.
2) that the Burmese military stop attacking the ethnic communities in
3) that the State Peace and Development Council immediately overturn the
shameful electoral laws that bars the political prisoners, including Nobel
Peace Prize winner Daw Aung San Suu Kyi, from participating in the political
4) that Senior General Than Shwe and the Burmese military authorities
engage in an inclusive political process;atripartite dialogue leading to a
national reconciliation; and fair, transparent and credible elections in which all
citizens of Burma / Myanmar, including Daw Aung San Suu Kyi, can freely
5) that the State Peace and Development Council startaprocess to amend
the 2008 constitution to ensureagenuine all inclusive democratic political
process in Burma.
We believe thatatripartite dialogue remains the best viable means towards achieving national
reconciliation, long-lasting peace and prosperity in Burma.
The Burmese regime, the State Peace and Development Council, has ignored numerous
demands from the UN Security Council, UN General Assembly, the UN Secretary General, world
leaders, neighbours, and ASEAN that the SPDC release all political prisoners including Aung San
Suu Kyi; work towardsanational reconciliation; and hold an all inclusive, credible election. The
international community is increasingly concerned that the SPDC continues to ignore calls to
show commitment to political reform towardsanational reconciliation.
Therefore, we, the Burmese Democratic Forces in Canada, call for the following:
1. that Canada, the international community and other relevant partners,
should absolutely make it clear ahead of time of what is expected of the
military regime with regards to its planned elections, and be prepared to
denounce any results short of international expectations or failure to
meet international standards of all inclusive, credible, free and fair
2. that Canada to takeastrong stance in making it clear to the military
junta that Canada is ready to support the United Nations Commission of
Inquiry for Crime against Humanity in Burma should the Burmese
generals fail to live up to the expectations of Canada and the
3. that Canada to supportaglobal arms embargo against Burma, as
there have been clearly demonstrated connections to the supplies of
arms and the repression of the people of Burma at the hands of the
Burmese Students Democratic Organization (Canada)
Democratic Burmese Community (Saskatoon)
National League for Democracy (LA) Canada Branch
Toronto: Kyaw Si Thu 416 230 0901, Aung Tin 647 343 7871, Mg Mg Oo 416 605 8765
Saskatoon: Min Naing 306 880 5355, Aung New Oo 306 261 1649,
Vancouver: Htay Aung 778-322-5385, Thet Naing 604 873 9126
Burmese Community (Saskatoon Canada) ပြည်တွင်းဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ပွဲ
၂၇၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၀ တော်လှန်ရေးနေ့ည- ဆေးနီမှုတ်(စပရေး)ကန်ပိန်း (မန္တလေး)
မန်းအုပ်စုက ဖရီး ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုပါ၊
ကျွန်တော်တို့ လဖစတ (AAMD) - Burma အင်အားစုမှ (စပရေး)မှုတ်ဆေးအနီတွေနဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်အနှံ့ နံရံတွေပေါ်
FREE, FREE Su Kyi, FREE Daw Su, FREE2010, FREE Aung San Su Kyi, ရွေးကြက်ခြေခတ်(ရွေးကောက်ပွဲအလိုမရှိ)
အစသဖြင့် လိုက်လံရေးသားကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအကျဉ်းသားများလွတ်
မြောက်ရေး၊ ၂၀၀၈နာဂစ်အခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး၊စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးရည်ရွယ်
မှုတ်ဆေးတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့ပေါ် နေရာတွေကတော့မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးချုပ်နံရံတွေ၊ TTC
(ပညာရေးကောလိပ်), နန်းရှေ့၊ရွှေကျောင်းကြီး၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်အရှေ့ဘက် ၆၉ လမ်း၊ ဗောဓိကုန်း၊ ၆၂ လမ်း၊
၆၄၊ ၆၅ လမ်း သိပ္ပံလမ်း၊ မြို့သစ်၊ လမ်း ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၆၊ ၈၇ လမ်းတွေနဲ့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးပတ်ဝန်းကျင်၊
ရွှေကျီးမြင်ဘုရားပတ်ဝန်းကျင်အစသဖြင့် ၀င်းနံရံ၊ တံခါးဝ၊ အုတ်ခုံ၊ ရေကန်၊ဓမ္မာရုံနံရံအစသဖြင့်တွေပေါ်မှာ ဆေးနီစပရေးဘူးနဲ့
အလားတူဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမျိုးတွေကို အခြားနယ်၊မြို့များမှာလည်းမပြတ်တမ်းဆက်လက် ဆင်နွှဲကြဖို့ အလေးအနက်
“၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ (သို့) စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ နောက်...
ထွက်ပေါက်ပိတ် နေသည် မှာ NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်န...
နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်...
Burmese Community (Saskatoon Canada) ပြည်တွင်းဖက်ဆ...
၂၇၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၀ တော်လှန်ရေးနေ့ည- ဆေးနီမှုတ်(စပရေး)ကန...